Sucuudiga Oo Pakistan Ka Caawinaya Dhaqaale Xumi Soo Waajahday – somalilandtoday.com
Sucuudiga Oo Pakistan Ka Caawinaya Dhaqaale Xumi Soo Waajahday
(SLT-Pakistan)-Dalka Pakistan oo ay kusii yaraaneyso lacagaha qalaad, wajahayana lacag yari iyo la tacaalida dhibaatooyinka dhaqaale ee mustaqbalka, ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay dhaxalsugaha Sucuudi Carabiya Mahammed bin Salman.
Waxaana si fudud loo fahmi karaa sababta ra’iisal wasaahara Pakistan Imran Khan uu sida degdega ah ugu baahan yahay lacago.
Dhaxalsuge Maxamed Bin Salman oo loo yaqaano MBS ayaa soo gaaray Pakistan isagoo balanqaadaya lacago balaayiin ah.
Pakistan ayaa noqotay halkii ugu horreysay uu booqdo safarkiisa uu ku marayo shan dal oo Aasiya ah, balse socdaalka dhaxalsugaha ee dalalka Indonesiya iyo Maleysia ayaa dib loo dhigay.
Siduu qaali u yahay socdaalka dhaxalsugaha?
Markii ugu dambeeysay oo xubin ka tirsan boqortooyada Sucuudiga uu booqdo dalalkan oo si weyn loo soo dhaweeyay ayaa ahayd sanadkii 2006, xiligaasi oo boqorkii Sucuudiga boqor Cabdalah bin Cabdilcasiis uu booqday labada dal ee hubka nuklerka heysta waa Hindiya iyo Paskitan.
Haatan ammniga ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo ra’isal wasaare Imran Khan uu sheegay inuu isagu shaqsi ahaan ka taxadari doono qaabka loo soo dhaweynayo boqortooyada Sucuudiga.
Booqashada dhaxalsugahan 33 sano jirka ah ayaa imaaneysa xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda gobolka, kaddib markii Hindiya ay ku eedeysay Paskitan weerarkii ugu dhimashada badnaa tobanaan sano oo lala beegsado ciidamadeeda jooga Kashmir.
Ddiyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Pakistan ayaa soo hawada sare kusoo dhaweeyay diyaaradii siday dhaxalsugaha Sucuudiga Maxamed bin Salam markii ay soo gashay hawada Pakistan.
Dhaxalsugaha ayaa waxaa salaamay Mr Khan wuxuuna sidoo kale salaan sharaf ka qaatay madaxa milatariga ugu xoogga badan Pakistan iyadoo roog cas loogu fidiyay garoonka diyaaradaha milatariga loona riday 21 madfac.
Ra’iisal wasaaraha Pakistan Imran Khan, ayaa u kaxeeyay dhaxalsugaha aqalka madaxtooyada halkaasi oo uusan deganeyn Mr Khan balse noqoneyso halka uu deganaanayo Maxamed Bin Salman labada maalin ee booqashada uu ku joogo dalkaasi.
Boqolaal ah guryaha raaxada oo ku yaala Islamabad ayaa la rumeysan yahay in loo diyaariyay ergeyda culus ee gaareyso 1000 qof.
Waxaa jiro xitaa warar sheegaya in kumanaan shimbiro ah la qabtay loona diyaariyay xaflada soo dhaweynta dhaxalsugaha Sucuudiga.
Maxay Pakistan ugu baahan tahay lacagaha?
Bankiga dhexe ee Pakistan ayaa waxaa ku jira $8 bilyan oo keliya oo ah lacagaha qalaad ee ku harsan waxaana waddanka dhibaato ka heystaa bixinta qarashaadka.
Booqashada Dhaxalsugaha Sucuudiga ee Pakistan
Tan iyo markii la dhaariyay ra’isal wasaare Imran Khan bishii Augosta wuxuu ku dadaalayay inuu kaalmo ka helo dalalka saaxiibka la ah si uu u yareeyo lacagaha Pakistan ay ka amaahaneyso Hay’adda Lacagta Aduunka IMFee shuruudaha adag ay la socdaa..
Booqashada Maxamed Bin Salmaan ayaa kusoo beegmeysa kadib markii boqorka Abu Dhabi Maxmed Bin Zayed al-Nahyan uu booqday Islamabad ayna boqortooyada Imaaraatka u yaboohday inay siinyeso 6$ bilyan si loogu taageerko kabka dhaqaalaha Pakistan.
Balse maalgelinta Sucuudi Carabiya ayaa intaasi ka badan iyadoo warbaahinteed ay tebineyso in heshiisyo rasmi ah oo gaaraya $20 bilyan.